आखिर कहिले कोरोना बिरुद्धको खोप तयार हुन्छ ? - आजकोNepal
आखिर कहिले कोरोना बिरुद्धको खोप तयार हुन्छ ?
संवाददाता १७ भाद्र २०७७, 5:36 am
‘कोरोना नेपालसम्म आइपुग्दैन ।’, ‘नेपालीको प्रतिरक्षा क्षमताले सजिलै कोरोना भाइरसलाई जित्नेछ ।’, ‘कोरोना लागेमा तातो पानी र बेसार खाएमा निको हुन्छ ।’ यस्ता यस्तै मनगढन्ते हल्ला फैलिरहँदा धेरैलाई लागेको थियो, कोरोनाले अब केही गर्दैन । तर, अहिले स्थिति फरक छ । कोरोनाले सर्वत्र भय र आतंक पैदा गरेको छ । कोरोना संक्रमणको दर र मृत्यु दरसमेत अनियन्त्रित ढंगले बढ्दो मात्रामा छ । यस्तो अवस्थामा धेरैका लागि चासो र सरोकार बनेको छ, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ।